Team Secret ရဲ့ PUBG Mobile လူစာရငျးအသဈ – Gaming Noodle
အငျအားကွီး Esports အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ Team Secret ရဲ့ Dota2အသငျးဟာ ပရိသတျမြားကွားမှာ ရပေနျးစားလှတဲ့ အသငျးတဈသငျးပါ။ Team Secret ဟာ PUBG Mobile ပွိုငျပှဲမြားကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျဖို့အတှကျ PUBGM အသငျးသားသဈစာရငျးကို မကွာသေးမီက ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ယငျး PUBG Mobile အသငျးဟာ မလေးရှားနိုငျငံမှာ အခွစေိုကျမယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
From the left: iSH0TZ, MADTOI, BiuBiu and Hyqul.
အသဈကွညောလိုကျတဲ့ စာရငျးထဲမှာ ပါဝငျလာခဲ့တဲ့ ကစားသမားမြားကတော့ BiuBiu, MADTOI, iSH0TZ နဲ့ Hyqul တို့ပါ။ ယငျးတို့ထဲမှာမှ iSH0TZ ဟာ PMCO Fall Split Global Finals ပွိုငျပှဲမှာ အဆငျ့ ၁၀ နဲ့ ၁၁ နရောကို ပူးတှဲရရှိခဲ့တဲ့ Yoodo Gank အသငျးက ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့သူဖွဈပွီး MADTOI ကတော့ ယငျးပွိုငျပှဲမှာပဲ အဆငျ့ ၄ နရော ရရှိခဲ့တဲ့ ILLUMINATE The Murder ရဲ့ အသငျးသားဟောငျးတဈဦးပါ။
ပွိုငျပှဲအတှအေ့ကွုံမြား ပွညျ့ဝကွတဲ့ ကစားသမားမြားနဲ့ ပါဝငျဖှဲ့စညျးထားတာကွောငျ့ Team Secret ရဲ့ PUBG Mobile အသငျးသဈဟာ အလားအလာကောငျးမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ အသငျးသားမြားဟာ မကွာခငျမှာ ကငျြးပတော့မယျ့ PUBG Mobile Pro League ကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျဖို့အတှကျ မလေးရှားနိုငျငံမှာ စခနျးသှငျးလကေ့ငျြ့နကွေပါတယျ။
“အကွာကွီးလကေ့ငျြ့ကွပမေယျ့ ပငျပနျးတယျလို့ မခံစားမိကွပါဘူး။ အသငျးတဈသငျးလုံးဟာ လာမယျ့ပွိုငျပှဲကို အနိုငျရဖို့အတှကျ အလှနျစိတျအားထကျသနျနကွေပါတယျ” လို့ အသငျးခေါငျးဆောငျဖွဈသူ BiuBiu က ပွောပါတယျ။ လကျရှိမှာ အသငျးသားမြားဟာ တဈနကေို့ အနညျးဆုံး ၁၀ နာရီ လကေ့ငျြ့နကွေတဲ့အကွောငျးကိုလညျး ပွောခဲ့ပါသေးတယျ။
The secret is out. Announcing our 2020 line-up for #SecretPUBGM! Our full squad will be streaming live tonight at 8PM,…
Posted by Team Secret on Monday, 20 January 2020
PUBG Mobile ဟာ ယခု ၂၀၂၀ မှာ ပွုလုပျမယျ့ပွိုငျပှဲမြားအတှကျ ဆုကွေးငှစေုစုပေါငျး ဒျေါလာ ၅ သနျးကြျောခြီးမွှငျ့ပေးသှားမှာဖွဈကွောငျး ယခငျက ကွညောခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ အငျအားကွီး Esports အသငျးမြားရဲ့ ရုနျးကနျလှုပျရှားနမှေုမြားနဲ့အတူ မိုဘိုငျးလျ Esports လောကဟာလညျး မထေ့ားလို့ မရအောငျ တဈရှရှေ့တေို့းတကျလာနပွေီပဲ ဖွဈပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြ ရှိပါတယျ။
Team Secret ရဲ့ PUBG Mobile လူစာရင်းအသစ်
အင်အားကြီး Esports အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Team Secret ရဲ့ Dota2အသင်းဟာ ပရိသတ်များကြားမှာ ရေပန်းစားလှတဲ့ အသင်းတစ်သင်းပါ။ Team Secret ဟာ PUBG Mobile ပြိုင်ပွဲများကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် PUBGM အသင်းသားသစ်စာရင်းကို မကြာသေးမီက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ယင်း PUBG Mobile အသင်းဟာ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်မယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အသစ်ကြေညာလိုက်တဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ကစားသမားများကတော့ BiuBiu, MADTOI, iSH0TZ နဲ့ Hyqul တို့ပါ။ ယင်းတို့ထဲမှာမှ iSH0TZ ဟာ PMCO Fall Split Global Finals ပြိုင်ပွဲမှာ အဆင့် ၁၀ နဲ့ ၁၁ နေရာကို ပူးတွဲရရှိခဲ့တဲ့ Yoodo Gank အသင်းက ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး MADTOI ကတော့ ယင်းပြိုင်ပွဲမှာပဲ အဆင့် ၄ နေရာ ရရှိခဲ့တဲ့ ILLUMINATE The Murder ရဲ့ အသင်းသားဟောင်းတစ်ဦးပါ။
ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံများ ပြည့်ဝကြတဲ့ ကစားသမားများနဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့် Team Secret ရဲ့ PUBG Mobile အသင်းသစ်ဟာ အလားအလာကောင်းမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အသင်းသားများဟာ မကြာခင်မှာ ကျင်းပတော့မယ့် PUBG Mobile Pro League ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် မလေးရှားနိုင်ငံမှာ စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်နေကြပါတယ်။
“အကြာကြီးလေ့ကျင့်ကြပေမယ့် ပင်ပန်းတယ်လို့ မခံစားမိကြပါဘူး။ အသင်းတစ်သင်းလုံးဟာ လာမယ့်ပြိုင်ပွဲကို အနိုင်ရဖို့အတွက် အလွန်စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်” လို့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ BiuBiu က ပြောပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အသင်းသားများဟာ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၁၀ နာရီ လေ့ကျင့်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
PUBG Mobile ဟာ ယခု ၂၀၂၀ မှာ ပြုလုပ်မယ့်ပြိုင်ပွဲများအတွက် ဆုကြေးငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅ သန်းကျော်ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ယခင်က ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အင်အားကြီး Esports အသင်းများရဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေမှုများနဲ့အတူ မိုဘိုင်းလ် Esports လောကဟာလည်း မေ့ထားလို့ မရအောင် တစ်ရွေ့ရွေ့တိုးတက်လာနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။